भिडियो – Gorkhali Dainik
गाउबाट युवाहरु बिदेशिन थाले पछी यो बहिनीले यसरि हलो जोत्दै ! सम्मान सहित एक शेयर गरौ हेर्नुहोस
Posted in भिडियो, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली
गाउबाट युवाहरु बिदेशिन थाले पछी यो बहिनीले यसरि हलो जोत्दै ! सम्मान सहित एक शेयर गरौ हेर्नुहोस गाउबाट युवाहरु बिदेशिन थाले पछी यो बहिनीले यसरि हलो जोत्दै ! सम्मान सहित एक शेयर गरौ हेर्नुहोस गाउबाट युवाहरु बिदेशिन थाले पछी यो बहिनीले यसरि हलो जोत्दै ! सम्मान सहित एक शेयर गरौ हेर्नुहोस गाउबाट युवाहरु बिदेशिन थाले पछी यो बहिनीले यसरि हलो जोत्दै ! सम्मान सहित एक शेयर गरौ हेर्नुहोस गाउबाट युवाहरु बिदेशिन थाले पछी यो बहिनीले यसरि हलो जोत्दै ! सम्मान सहित एक शेयर गरौ हेर्नुहोस गाउबाट युवाहरु बिदेशिन थाले पछी यो बहिनीले यसरि हलो जोत्दै ! सम्मान सहित एक शेयर गरौ हेर्नुहोस गाउबाट युवाहरु बिदेशिन थाले पछी यो बहिनीले यसरि हलो जोत्दै ! सम्मान सहित एक शेयर गरौ हेर्नुहोस गाउबाट युवाहरु बिदेशिन थाले पछी यो बहिनीले यसरि हलो जोत्दै ! सम्मान सहित एक शेयर गरौ हेर्नुहोस https://youtu.be/WaEowqC4GGA
दुई महिना अघि १६ वर्षको उमेरमै विवाह गरेकी एक किशोरीको रह-स्यम निधन भएको छ । झापाकी स्थानिय निमा लिम्बुको १६ वर्षकै उमेरमा निधन भएको हो । उनले दे-ह-त्या-ग गरेको श्रीमानका परिवारका सदस्यले बताएका छन् । घ-टना हुँदा आफुहरुले थाहा नपाएको परिवारका सदस्यले बताएका छन् । वर्षात लिम्बु (श्रीमान) र सासुले किन यस्तो निर्णय गरिन् भन्ने आफुहरुलाई थाहा नभएको बताएका छन् । तर निमाका परिवारका सदस्यले भने घट-ना रह-स्यमयी भएको बताएका छन् । घ-टनाको सत्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । निमाको दिदीले भनिन्, उसले देह त्याग गरेको भएपनि त्यसको के कारण थियो भन्ने कुराको खुलासा हुनुपर्छ । आफ्नो जिवन नै त्या’ग गर्ने निर्णय त उसले त्यसै गरीन होला । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस् .. https://youtu.be/nUzgnIA5uZs निमा कात्तिक ३० गते उनी घरवाट निस्केकी थिइन् । तर उनी कहाँ छन् भन्ने कुरा परिवारले जा